Hjem > Uncategorized @so > Hadii tijaabdu tahay in lagaa heley
Hadii tijaabdu tahay in lagaa heley
HIV-ku maanta waa cilad-xanuun oo joogto ah, qofkuna waa la noolaan karaa mudo nolol dheer ah sida qof kasta oo kale. Si taasi u dhacdo, waa muhiim in la bilaabo daaweynta HIV-ka isla markiiba. Tani ma aha oo kaliya qofka dantiisa/qaybtiisa, waxay sidoo kale leedahay faa iidada ah inuu qofku noqdo mid ka aan qaadsiin karin caabuqa ka dib waqti yar oo daaweyn ah. Dabagalku wuxuu ka dhacayaa isbitaal leh qaybta infakshanka. Mar alla markii ay daaweyntu bilaamato oo aad ogaato inay daawadu shaqayso, waxay sii wadi doontaa kontroolka hal mar ama laba jeer sanadkii. Daaweynta HIV-ku maanta waxay leedahay waxyeellooyin aad u yar oo badiyaa waa hal kaniini maalintii.